Man City oo qiimo qaali ah ku doonaysa weerar yahanka Borussia Dortmund ee Aubameyang – Gool FM
Man City oo qiimo qaali ah ku doonaysa weerar yahanka Borussia Dortmund ee Aubameyang
Liibaan Fantastic July 24, 2016
(Manchester) 24 Luulyo 2016 Man City ayaa bartilmaameed xoogan ka dhiganaysa weerar yahanka kooxda Borussia Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang suuqa kala iibsiga ee xaggaagan.
Sunday Express ayaa daaha ka qaaday in kooxda macalin Pep Guardiola ay ka shaqaynayso dhamaystirka saxiixa 27 jirka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang.
Tababare Pep Guardiola ayaa ku qanciyay maamulka City la soo wareegida Aubameyang, waxaana la filayaa inay ku dalbadaan aduun dhan 58 milyan oo Ginni oo ah qiimaha lagu burburin karo heshiiskiisa Borussia.
Haddii City ay dhamaystirto saxiixa Pierre-Emerick Aubameyang wuxuu noqonayaa laacibka ugu qaalisan taariikhda Man City isaga oo ka saramaraya De Bruyne oo ay kula soo wareegeen 54 milyan oo Ginni xaggaagii hore.
SAWIRRO: Kolo Toure oo ka tagay Premier League kuna biiray naadiga Celtic....(Lambarkee loo xiray?)
Lucas Leiva oo seegi doona kulanka furitaanka horyaalka ingiriiska ee Arsenal